INDLELA YOKUCELA UKUCHEBA IINWELE- ISIGAMA SENWELE YAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Indlela yokucela ukucheba iinwele: Isigama seNwele Samadoda
Eyona Iinwele Zamadoda Indlela yokucela ukucheba iinwele: Isigama seNwele Samadoda
Ukwazi indlela yokucela ukunqunyulwa kweenwele kubalulekile ukuhamba ngaphandle kweenwele kunye nenye yeenwele zezona zilungileyo. Kodwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zesimbo…
Ukwazi indlela yokucela ukunqunyulwa kweenwele kubalulekile ukuhamba ngaphandle kweenwele kunye nenye yeenwele zezona zilungileyo. Kodwa ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zezitayile kunye neendlela ezahlukeneyo zokucheba iinwele, ukufunda ukuthetha nomchebi wakho wokuchaza iinwele ozifunayo kungabonakala ngathi ngumceli mngeni ngamanye amaxesha. Ngethamsanqa, ngelixa amagama esigama kunye neenwele ezinamagama zinokuvakala zisoyikisa, ukuxelela umchebi wakho indlela yokucheba iinwele zakho kulula ukuba ukhumbula iingongoma ezimbalwa eziphambili.
Apha ngezantsi, uya kufumana isikhokelo sokucheba iinwele samadoda. Ukusuka kweyiphi inwele ekufanele ukuba ufike kuyo umahluko phakathi kokuphela kunye ne-taper ukuya apho unqunyulwa khona, zininzi izinto ezinokuchaphazela umgangatho kunye nokujonga kwekhanda lomfana. Nokuba ufuna ukucela ukuphela okanye ukusika emacaleni kunye ne-quiff, ipompadour, ikama ngaphezulu, abasebenzi abasikiweyo okanye i-faux hawk ngaphezulu, nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuchetywa kweenwele zakho kunye nesitayile kwindawo yokucheba iinwele.
1Uthetha Njani Kumchebi Wakho
MbiniIsigama esiqhelekileyo sokucheba iinwele
2.1Iinwele zokucheba iinwele
2.2I-Taper vs Fade
2.3Quiff vs iPompadour
2.5Ezona mveliso zeNwele ziBalaseleyo kwaMadoda
3Indlela yokucela ukuba iFade yeeNwele
3.4Ulusu kunye neBald Fade
4Uyicela njani i-Undercut
5Iindidi eziqhelekileyo zokucheba iinwele zamadoda
5.4Coca iinwele eziMva
5.12Iinwele eziPhakathi eziPhakathi
6Apho Unokufumana khona iinwele
6.1Ixabiso eliPhakathi lokucheba iinwele kwamadoda
7Indlela yokucela ukucheba iinwele
Uthetha Njani Kumchebi Wakho
Unxibelelwano kunye nokulungiselela zizizathu ezisisiseko zokuba abanye abantu basoloko bephetha ukufumana iinwele ezifanelekileyo. Indlela yokucela ukunqunyulwa kweenwele kufuna ukukwazi ukunxibelelana nezinto ozifunayo kunye nemiyalelo ethile.
Umzekelo, sukundwendwela indawo yokucheba iinwele kwaye ucele iinwele eziqhelekileyo - akukho mntu waziyo ukuba yeyiphi na inguqulelo yakho yesiqhelo. Ngelixa uhlala uzama ukuchaza inkangeleko yakho ohamba kuyo, ngakumbi ukuba awusazi isigama esifanelekileyo sokucheba iinwele, umfanekiso uxabisa amagama aliwaka. Ekugqibeleni, xa unokuba neenkcukacha malunga nohlobo lweenwele ongazithandayo, ngcono ukubonakala kokugqibela kuya kuba.
Kubaqalayo, yenza uphando nge iintlobo ezahlukeneyo zokucheba iinwele zamadoda ukukunika ulwazi oluyimfuneko lokuthetha nomchebi wakho ngolwimi aya kuliqonda. Kwaye khumbula ukuba kukho izinto ezahlukeneyo kwizinwele zonke. Nokuba awuyazi ncam into yokunqumla ongathanda ukuzama, xelela umchebi wakho ngendlela othanda ngayo ukuzilungisa iinwele zakho nokuba loluphi ubude beenwele obukhethayo. Ukuba unobungcali, uya kuba neengcamango ezimbalwa zokucheba iinwele ngokusekelwe kwiimfuno zakho.
Isigama esiqhelekileyo sokucheba iinwele
Ngaphambi kokuba uchaze iinwele ozifunayo, kuya kufuneka kuqala ufunde amagama ambalwa okucheba. Abasebenza ngeeBlack banolwimi lwabo, kwaye ukuba ufuna ukufumana iinwele ezilungileyo , Kuya kufuneka ufunde iziseko zesigama sokucheba iinwele samadoda.
Iinwele zokucheba iinwele
Iinwele zokucheba iinwele , ekwabizwa ngokuba bubungakanani bokubagada, bamele ubude obahlukeneyo beenwele ezisikwe zizichebe zeenwele. Ubungakanani bezinto zokucheba iinwele ukusuka kwinombolo 1 ukuya kwinombolo 8 - mfutshane ukuya kwelona lide. Kuba uninzi lwabantu luza kuphelelwa okanye lucuthwe emacaleni, ukwazi ukuba ubungakanani bakho bokugada kuya kunceda xa ucela ukuphela kwaye uxelele umchebi wakho ukuba ufuna indlela emfutshane ngayo. Ngokufanayo, iinwele okanye ii-balding clippers zinokusetyenziswa xa ucela ukusikwa kwe-buzz okanye ukusika abasebenzi.
Nantsi ireferensi ekhawulezayo yeendlela ezahlukeneyo zokucheba.
Inani 1: Inye yesibhozo ye-intshi
Inombolo yesi-2: Ikota enye ye-intshi
Inombolo yesi-3: Isibhozo sesibhozo se-intshi
Inombolo 4: Isiqingatha se-intshi
Inani lesi-5: ezintlanu-ezisibhozo ze-intshi
Inani le-6: Iikota ezintathu ze-intshi
Inombolo yesi-7: Isixhenxe se-sibhozo se-intshi
Inombolo 8: I-intshi
Leliphi inani lokucheba olikhethileyo eliya kuxhomekeka kwindlela amafutshane ofuna ngayo amacala akho kunye nokusika ngasemva. Kwaye ukusika i-buzz esezantsi, sicebisa ukuba ukhethe inombolo 1, 2 okanye 3.
I-Taper vs Fade
Uninzi lwee-barber zisebenzisa amagama athi taper okanye fade ngokungafaniyo, kodwa inyani kukuba, kukho umahluko omncinci phakathi kokuphela kunye ne-taper. Inwele efipheleyo iyadibana ukuya eluswini, ngelixa i-taper ingapheli njengefutshane.
Ngelixa zombini zithathwa njengezinwele ezidibeneyo, njengokucheba okulondoloziweyo, i-taper ishiya iinwele ezincinci kwaye ayivezi ntloko. Siza kuxoxa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zokucheba iinwele kamva!
Quiff vs iPompadour
Zombini i-quiff kunye ne-pompadour ziinwele ezakudala eziguqulweyo ukuze zilungele imikhwa yale mihla. Njengeendlela ezimbini ezithandwayo zeenwele zeminyaka edlulileyo, ezi iinwele zinamandla ziyafana kwaye zihlala zididekile. Zombini zibandakanya ukuxubha umphambili weenwele ukongeza ivolumu.
Umahluko phakathi kwe-quiff kunye ne-pompadour kukuba, ngelixa i-quiff ibrashiwa phambili ukwenza ivolumu yomoya kunye nokukhanya, ipompadour ibrashiwe ngasemva ukwenza uboya bube bungqindilili kwaye buthambeke ngakumbi. Nangona umahluko ucace gca, ubuchule bokuyila bahlukile kwaye babodwa.
I-neckline yeenwele zakho ibaluleke kakhulu kwinkangeleko yakho iphela. Ezi nkcukacha zihlala zihoywa, kodwa zinokwenza umahluko wokwenyani kwisitayile sonke seenwele zakho. Ngethamsanqa, abafana banezinto ezininzi abanokukhetha kuzo xa kuziwa ekuxubeni iinwele ngasemva kwiintamo zabo.
Ezona zikhetho zintathu ziphambili zivaliwe okanye isikwere, zijikelezwe, zaza zancitshiswa okanye zaphela Utshintsho oluthe ngcembe olungaphazanyiswa kakhulu, sicebisa ukuba iintamo zamadoda zibe zirhangqwe okanye zicofelwe ukucoceka.
Izinwele ezilungisiweyo zibhekisa kwinkangeleko yendalo iinwele zakho ngaphandle kwemveliso yeenwele ezikhazimlayo. Ukuba ufumana iinwele ezimfutshane kwaye uneenwele ezingqindilili ezingqindilili, emva koko kusenokungafuneki ukuba ufake iimveliso zesitayile kuzo zonke izinto ezigqityiweyo. Ngaphandle koko, kukho ezinye pomade elungileyo , Iimveliso ze-wax kunye neenwele zodongwe ezibonelela ngemeko yokubukeka kwendalo.
Kwelinye icala, amanye amadoda akhetha iinwele ezinesitayile kunye nokuqaqamba okuphakathi ukuya phezulu. Ukugqitywa okucwebezelayo, okucwangcisiweyo yindlela iinwele zakho eziza kukujonga ngayo okanye i-barber yakho ifaka imveliso yesitayile ukongeza ivolumu okanye ulungelelanise iinwele. Umahluko phakathi kweenwele ezenziwe ngombala zendalo kunye neenwele ezinesitayile zichazwa kakhulu ngobude obuphakathi ukuya kubude obude bezinwele, kubandakanya ikama ngaphezulu, i-faux hawk, i-quiff, i-pompadour, iinwele ze-spiky, kunye nomphetho.
Ngapha koko, ukuba une-wavy eshinyeneyo okanye iinwele ezigobileyo, ngokuqinisekileyo kuyakufuneka usebenzise i-pomade eyomeleleyo okanye i-wax yeenwele xa uthambisa iinwele zakho kwinkangeleko oyifunayo.
Udongwe lweNwele lwaMadoda | I-Smooth Viking Clay Pomade yeMatte egqityiweyo kunye nokuBamba okuQinisekileyo (ii-2 ii-ounces) -Okungafuneki ... Izimvo eziyi-3,481 $ 13.97 Jonga iAmazon
Kulabo abane iinwele ezishinyeneyo , isikere esincinci sinokusetyenziselwa ukuphalaza ubunzima kwaye unike iinwele zakho ukuziva zilula. Obu buchule bunokwenza kube lula ukwenza iinwele zakho. Echasene neenwele ezibhityileyo, abafana banokucela iinwele zabo kumaleko. Izinwele ezibekekileyo zifuna ukusika iindawo ezithile ezimfutshane ukuze iinwele ezinde ziphumle ngaphezulu, zenze i-gradient okanye i-layered texture.
Ngethamsanqa, uninzi lwe-stylists lukrelekrele ngokwaneleyo ukuba luzimele ngokuzimeleyo ukuba luthini na xa kufuneka uceke iinwele kwaye uzenze nini iileya, ngenxa yoko awuzukufuna ngenene ukwenza lo mgwebo umnxeba ngokwakho.
Indlela yokucela ukuba iFade yeeNwele
Ngelixa sinqwenela ukuba kube lula njengokuxelela i-barber yakho ukuba ufuna i-taper fade, ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zamaphepha kunye nokuphela, ucela ukuphela kweenwele kufuna ukuba icaciswe ngakumbi.
Kubaqalayo, ukuphela kweenwele kunye neetaper zindlela zokusika iinwele zomfana emacaleni nasemva. Ukuphela okanye ukucoca yindlela yokucheba iinwele apho iinwele ziba mfutshane kubude njengoko zidibana entanyeni kunye nasemacaleni, kunye nakwindlebe yakho.
Ukusukela emacaleni amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu zonke ziingqumbo kwiindawo zokucheba iinwele, uninzi lusika isimbo esinamacala aphelileyo. Nangona kunjalo, oku kuthetha ukuba ukhetha ukuba loluphi uhlobo lwe-taper okanye i-fade cut cut onokuba nzima.
Xa ukhetha ukubuna Kukho izinto ezimbini eziza kuba nefuthe kwisigqibo sakho- apho ufuna ukuphela khona kwaye ufuna ukuba mfutshane kangakanani. Ukufikelela kwinqanaba lokuqala, kukho iinwele eziphakamileyo, eziphakathi kunye nezisezantsi zokucheba. Emva koko, kuya kufuneka uthathe isigqibo phakathi kokufumana ulusu / impandla , ukuhla , iRazor, okanye ugqabhukile.
Ukuhla okuphantsi zizinzile kwaye ziqala ngaphezulu kwendlebe. Zilungele iofisi okanye iinwele zobungcali apho ungafuniyo ukubonisa ulusu kakhulu.
Ukuphela okuphezulu kuyajikeleza kwaye kunika umahluko omkhulu. Ukuphela okuphezulu kuqala kufutshane nomphezulu wentloko yakho, ujikeleze iitempile zakho, kwaye udibanise ezantsi.
Ubunzulu obuphakathi bunika ibhalansi phakathi kweenwele eziphakamileyo nezisezantsi zokuphela kweenwele. Ukuqala embindini wecala lwentloko yakho, ukusikeka okuphakathi okuphakathi kuyahluka kwaye kusebenza nazo zonke iintlobo zezitayile.
Ulusu kunye neBald Fade
I-bald okanye ulusu luyaphela kukuphikisana okupheleleyo kwetaper fade. Ngelixa iinwele ezichetyiweyo zidityaniswa zineenwele, i-bald fade iyehla iye eluswini kwaye iveze isikhumba sakho sasentloko sokugqibezela okuphezulu. Njengolunye lweentlobo ezithandwa kakhulu zokucheba iinwele, i-bald fade isebenza kakuhle uninzi lweenwele zamadoda zamva nje.
Ukuthelekisa ukuphakama okuphezulu kunye nokuphantsi phakathi kokuphela kuko konke malunga nokhetho lomntu. Ekugqibeleni, ezona zinwele ziphelileyo ezingamadoda zixhomekeke kwizinwele ozifunayo kunye nokhetho lwakho. Ukuba ucela umchebi wakho ukuba aphele, soloko ukhululekile ukufumana igalelo lakhe.
Uyicela njani i-Undercut
Inkqubo ye- ngaphantsi yinwele eyaziwayo egcwalisa iinwele ezininzi ezipholileyo, ngamanye amaxesha ezingcono kunokuphela. Ngokungafaniyo nokuphela, okuthe chu ukuya ezantsi emacaleni entloko, i-undercut isinqumle kakhulu emacaleni kwaye ubude bunye. Indlela emfutshane kunye nokuqaqamba kwe-undercut ixhomekeke kwinto oyicelayo kuwe.
umfanekiso weenwele zendoda
Umzekelo, abafana banokukhetha phakathi kwe-undercut kunye ne-cutcut undercut. Umahluko kukuba unqanyulwe ngaphantsi lutshintsho oluphawuleka ngakumbi ukusuka kwizinwele ukuya phantse kungabikho nwele. Eyona nto ibalulekileyo kukuba, iinwele ezinde ngaphezulu ziyasuswa ngamacala ukwenza umahluko ngakumbi ngokubuna okungaphantsi.
Izitayile eziqhelekileyo zangaphantsi zibandakanya ukubuyela umva, ikama ngaphezulu, ubukroti, kunye neenwele ezimdaka ngombala. Ngokubanzi, iinwele ezingaphantsi kwamadoda ziyangxama kwaye zinesitayile.
Iindidi eziqhelekileyo zokucheba iinwele zamadoda
Ukuba ukhangela ezona zinwele zipholileyo zamadoda, ke olu luhlu lweendlela zamvanje nezishushu ziya kukunceda ukhethe eyona ndlela ukujonga ngayo. Apha ngezantsi, siza kuchaza iintlobo ezahlukeneyo zezinwele zale mihla kunye nokubonelela ngemizekelo ukuze wenze isigqibo esifanelekileyo.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba uzinze kwinkangeleko ethile, hlala ukhumbula uhlobo lweenwele zakho kunye nokuthambeka ukongeza kwixesha ofuna ukulichitha ukwenza iinwele rhoqo kusasa. Ngelixa ezinye iinwele ezinje ngokusikwa kwe-buzz kunye nokusika abasebenzi zikuvumela ukuba uphume uphume ngaphandle kwendlu ngaphandle kwemveliso yeenwele, isitayile, ikama ngaphezulu, okanye ngaphezulu kwezityalo lelinye ibali.
I-barber yakho okanye i-stylist inokukunceda uthathe isigqibo sokuba ubuza imibuzo malunga nokuba zeziphi izimbo ezifanelekileyo kuhlobo lweenwele zakho.
I-quiff yiclassic, i-retro yeenwele yamadoda afuna ukwenza ingxelo. Iinwele emacaleni zifutshane ngokufiphala okanye i-undercut, ngelixa iinwele ezinde (ubuncinci ezi-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4) ngaphezulu zitshintshelwa phambili kwisitayile esinomoya, esinamandla. Ukuphakama kwesikhwama kuxhomekeke kubude beenwele zakho, kodwa ngokuqinisekileyo uya kuyidinga imveliso ukuyibamba.
Ukucela i-quiff, kuya kufuneka ukhule iinwele zakho ukuze umchebi wakho abe nobude bokusebenza. Kwitrifi yanamhlanje ebunjiweyo, sicebisa ukuba ulusu oluphezulu luphele emacaleni asikwe ngooclippers; nangona unokukhetha ixesha elide, elifakwe kwi-tapered inombolo 2 ukunqanda ukuhamba mfutshane.
Ngokuxhomekeke ekubeni ufuna i-hairstyle ye-quiff ye-quiff emfutshane okanye ephakathi, i-barber yakho iya kusebenzisa isikere ukunciphisa i-top, ishiye umphetho ungqindilili kwaye umde kunabanye ukuphatha isitayile. Ukugcina ujongo olufihliweyo kunye nevolumu eninzi kubalulekile ekwenzeni isitayile selungelo.
I-pompadour yenye yeenwele ezibonakalayo ezihlala zisisitya sokucheba iinwele. Ipompadour ifuna iinwele ezifanayo ezifanayo njenge-quiff, kodwa iimfuno zesitayile zahlukile. Ipompadour yeklasikhi icwangciswe ngakumbi kwaye ifuna ipomade eyomeleleyo yokugcina indawo; nangona abafana bekhetha ukufumana ubungangamsha bale mihla, obubhalwe ngakumbi ngokugqitywa kwendalo.
Ukubuza i-barber yakho nge-pompadour, uya kuphinda ufune isixa esifanelekileyo sobude bokusebenza. Amacala aya kuphelelwa, atyunyiwe, okanye anqunyulwe, kwaye iinwele phezulu ziya kufuna ubuncinane ii-intshi ezintathu ngaphambili kunye no-2 intshi ukuya ngasemva. Kungenxa yokuba, apho i-quiff ibhalwe phambili, ubukhazikhazi bubuyiselwe umva.
Inkqubo ye- ikama ngaphezulu iye yaba lolunye lwezinwele ezipholileyo kule minyaka idlulileyo. Iklasi kodwa ilula, njengenxalenye esecaleni, ikama yokucheba iinwele iza ngeendlela ezininzi. Umzekelo, kukho Ikama liphele kwaye ngaphantsi. Emva koko unokufumana umchebi wakho ukuba agxininise kwinxalenye ngokujiya isikhewu, ngokwenza njalo udale indawo enzima. Okokugqibela, njengoko usenza isitayile phezu kwekama, ungayibrasha ngqo ngaphezulu okanye kwi-diagonally yevolumu eyongezelelweyo. Njengoko ubona, eyona nto intle yekama ngaphezulu kukusebenza kwayo, kuba ilungele naluphi na uhlobo okanye ubude beenwele.
Ukucela ikama ngaphezulu, kuyakufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukuphela okanye ukusika emacaleni. Ukuba ucela i-barber yakho ikama ukuba liphele, liphezulu kangakanani okanye liphantsi kwaye licofiwe okanye liphelile kuya kugqiba ukujonga kokugqibela. Inyathelo elilandelayo kukujonga ukuba ngaba ufuna ikama elifutshane okanye elide ngaphezulu ngaphezulu. Nabani na ubuncinci i-intshi ezi-2 zeenwele unokufumana oku kujongeka ngokumane ahlule iinwele kwelinye icala kwaye adibanise nenxalenye.
Ukwenza ikama ngaphezulu, ngokuqinisekileyo uyakufuna ipomade elungileyo okanye i-wax yeenwele ukutshayela iinwele kwaye uzigcine usuku lonke. I-pomade eyomeleleyo yokubamba kunye nokuqaqamba okuphakathi kunokubonelela ngokugqibelela okuhle, ngelixa i-wax yeenwele inokubonelela ngokuvela kwendalo. Le yokugqibela ingakumbi yile comb yanamhlanje ngaphezulu.
Coca iinwele eziMva
Zidle umva iinwele iyaqhubeka nokuba yinwele ye-badass. Njengomnye wokusikwa okumbalwa kunye nezitayile ezihlala iinwele ezimfutshane, eziphakathi kunye nezinde, Iinwele ezibuyileyo ezibuyileyo nikela ibhalansi entle phakathi kokudideka kweklasikhi kunye nehipster yanamhlanje. Njengoninzi lwezinye iinwele ezinje ukuza kuthi ga ngoku, abafana banokukhetha phakathi kwe-slick back undercut kunye ne-slicked back fade. Nangona kunjalo, umxholo oqhelekileyo wokuxubha kunye nokutsala iinwele zakho ungasetyenziswa phantse kuyo nayiphi na inwele.
indlela yokubala uphawu olunyukayo
Nokuba yeyiphi na indlela, emva kokuba ubuze umchebi wakho ukuba abuye umva, elona nyathelo libalulekileyo kukusebenzisa imveliso elungileyo yeenwele. Ukujonga okuthe tyaba kwehipster, uya kufuna ipomade eyomeleleyo ngokuqaqamba okuphezulu kwisiphelo esimenyezelayo esiya kuhlala sitayile yonke imini. Eyona nto intle malunga nokubuyela umva kukuba iinwele zakho zinde ngokwaneleyo ukuba zingene kwisitayile, kwicala elisecaleni, okanye kwiipiksi ukuba uyadikwa kukujonga okufanayo yonke imihla.
Inkqubo ye- ifeksi yinto eyonwabisayo, iinwele ezihlekisayo zamadoda angafuni i-mohawk epheleleyo enamacala achetyiweyo. Eyaziwa nangokuthi yi-fohawk, i-faux hawk cut haircut ithatha izinto kwi-mohawk kwaye iyitone phantsi ngokongeza i-fade okanye i-undercut emacaleni. Nangona kunjalo, ukwenza inkangeleko elungileyo, kuya kufuneka uxelele i-barber yakho ukuba ishiye ubude obuninzi embindini wentloko yakho.
Ngelixa i-mohawk inokutsala amehlo, i-faux hawk inokuthotywa phantsi yonke imihla. Kwaye nangona kukho iintlobo ezahlukeneyo zezitayile ze-fohawk, ukusuka kwi-faux hawk fade ukuya kwezo zinemizobo emifutshane, emide, okanye emdaka, ukuloba iinwele zakho kulula kakhulu kunokuba ucinga.
Ukwenza isitayile se-faux hawk, faka nje imveliso kwizinwele zakho uze uyihlambe yonke uye phezulu uye kumbindi wentloko yakho. Ngokungafaniyo ne-mohawk, awudingi ukuba zonke iinwele zincanyathiselwe embindini - ubumbeko obuncinci kunye nobumdaka bunokuhamba indlela ende yokwenza oku kujongeka kuqheleke.
Inkqubo ye- ukusikwa kwe-buzz kukucheba okufutshane okufutshane kwabo bafuna ukujonga okulula, okulondolozwa kancinci. Ngelixa unokukhetha ukuhamba ngokuphela okuphezulu kwaye okuqinileyo, apho iinwele ngaphezulu zibhalwe mfutshane kakhulu kwaye amacala aphelile, uninzi lwamadoda lukhetha ubungakanani bokuba lilinde ubude obunye obujikeleze intloko.
Ukuba oku kukunqunyulwa kwakho okukhethiweyo, unokukwazi ukunqumla iinwele zakho ekhaya kunye neenwele ezifanelekileyo, nangona abanye beya kufuna ukutyelela umchebi ukuqinisekisa ukuba bayasikwa. Kulula ukufumana isitayile ukuba unayo imilo efanelekileyo yentloko kuyo, ukusikwa kwe-buzz kuhlala kuyintandokazi yokucheba iinwele.
Umsebenzi osikiweyo uyathandwa kuba uyathandeka kwindalo iphela. Ikwabizwa ngokuba yi Inwele ye-Ivy League kuba abafana be-preppy abavela eHarvard, ePrinceton naseYale bayayithanda, onke amadoda anokuwunxiba lo mkrwe akukhathaleki nokuba abunjani na ithambo okanye imilo yobuso. Ngomqolo omfutshane kunye namacala kunye neesentimitha ezimbalwa zobude ngaphezulu, abasebenzi banciphisa iinwele zilungile kwabo bangafuni kujonga iinwele ezininzi kodwa basafuna ukhetho lwecala elitshisiweyo okanye inxenye emfutshane.
Ukucela ukuba abasebenzi basikwe kulula. Mxelele nje ukuba umchebi wakho ufuna enye, ufuna ukuba amacala aphele njani, kunye nobude bokushiya ngaphezulu, kwaye uya kukhathalela okuseleyo. Ukuba ufuna ukukwazi ukutshayela iinwele zakho ngaphambili, cela umchebi wakho ukuba ashiye ubude obuncinci kwimiphetho. Umahluko owongezelelweyo, cela ukuphela okuphezulu; Ngaphandle koko, ukuphela okuphantsi kungokwesiko.
Ukunqunqwa kwabasebenzi kufana nesityalo esenziwe ngombala- ungayishiya ngokwendalo kwaye ungazinzisi ixesha elininzi, okanye ungafaka i-matte pomade okanye i-wax yeenwele kwisiphelo esenziwe ngombala. Kwaye ukuba ukhetha ukuyitshayela kwelinye icala, yishiye ingcolile, okanye uyigcine ithe tyaba, abasebenzi abasikiweyo baya kuhlala bekhangeleka belungile.
Inkqubo ye- Isityalo saseFrance , ekwabizwa ngokuba sisicatshulwa esenziwe ngombala, kujongeka njengokunqunqwa kwabasebenzi kodwa ngokwahluka okuchuliweyo. Eyona nto iphambili kwisityalo sisiphelo esincinci kodwa esichaziweyo ngaphambili kwentloko yakho. Oku kunqunyulwa kulungiselelwe ngokukodwa abafana abaneenwele ezishinyeneyo njengoko kuvumela isitayile esilula.
Njengezinwele ezihamba nzima mva nje, uninzi lweenwele ziya kuyazi kanye le nto uyifunayo. Konke okufuneka uchaze yindlela emfutshane ofuna ngayo umphetho kunye neenwele ngaphezulu nokuba zingaphela njani emacaleni.
Unomphetho unokongezwa kuninzi lweenwele zepeyinti ethandwayo. Zombini ezi Isityalo saseFrance kunye neenwele zikaKesare ziiyantlukwano zabasebenzi ezisikwe ngemiphetho ebandakanyiweyo. Ezi zitayile ziya kubathambisa abo bafuna ukusikwa okufutshane kodwa bangafuni ukubukeka okungqwabalala, kohlobo lomkhosi. Ngapha koko, imiphetho ijongeka intle kwiintlobo ezahlukeneyo zeenwele, ubude kunye nokwenziwa, kubandakanya i-wavy kunye neenwele ezigobileyo.
Ukufumana umphetho, xelela umchebi wakho ukuba ashiye iinwele ngaphambili ixesha elide kunezinye. Kuhlala ixesha elingakanani kuhlobo lweenwele zakho nokuba kulawulwa njani. Ukuba awuqinisekanga malunga neenwele ezinomphetho, qiniseka ukuba ubuze umchebi wakho kwaye ufumane uluvo lwakhe.
Inkqubo ye- icala icala Iinwele zodidi oluphezulu zilungele nawuphi na umsitho. Banobuhlobo kwaye banobunkunkqele, amadoda anokunxiba iinwele ezisecaleni eofisini okanye ngomhla ngaphandle kokubuyisela inkangeleko yazo. Ngelixa icala elisecaleni linokujongeka ngokufana nekama ngaphezulu kweliso elingafundiswanga, kukho umahluko ophantsi.
Kwelinye, icala elisecaleni lingaphezulu kwesitayile esakhiweyo kwaye ihlala iza nenxalenye nzima kwelinye icala. Ngokuchaseneyo, ikama ngaphezulu linikezela ngokuhamba okungaphezulu kwaye ihlala idityaniswa idiagonally-umva kunye necala.
Ngenxa yokuba icandelo elisecaleni lisikiwe kwindalo iphela, ukubuza umchebi wakho kunokuba yeyona nto ilula yokucheba iinwele oya kuyifumana. Inxalenye yecala elidala lokucheba iinwele liza nefifi ephantsi, kodwa abanye abantu banokufuna ukuzama uguqulelo lwangoku ngokubuza ukuphela okuphezulu ngenxalenye eshinyeneyo.
Icandelo leenwele zecala lifezekiswa ngokwahlulahlula iinxalenye zakho zendalo kunye nokudibanisa icala elinye ngaphezulu. Ngokwahlula iinwele ecaleni kwaye ubumbe iinwele ezijikeleze ubuso ngokufanelekileyo, isitayile sikhangeleka sithambile kwaye siyindalo ngakumbi.
Izinwele ze-Spiky zazilunwele oluthandwayo kwiminyaka ye-90 kwaye zafezekiswa ngokufaka ijeli kunye nokujija kweenwele ukwenza ii-spikes. Ngelixa izitayile ezinesipikha zibuyela umva, abafana abasasebenzi ngejeli kakhulu. Endaweni yoko, ipomade, i-wax okanye udongwe lusetyenziselwa ukubonakala okubhaliweyo kunye / okanye okujongeka. Ngokugqitywa kwendalo, iinwele ezi-spiky zinokumangalisa ukuzithoba kumadoda aneenwele ezimfutshane.
Mane ubuze i-barber yakho ukuba i-taper fade okanye i-undercut idibene kunye ne-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 zeenwele ngaphezulu. Khawukhumbule nje ukuba iinwele ze-spiky zilungele amadoda anenwele ezingqindilili kuba isitayile sokucheba iinwele ngale ndlela sinokuveza isikhumba entloko.
Iinwele eziPhakathi eziPhakathi
Izinwele eziphakathi Ngaba ugqibelele phakathi kwabafana abangaqinisekanga nokuba bayahamba ngeenwele ezinde okanye ezimfutshane. Ngokusebenza ngokungafaniyo kweenwele ezinde eziphakathi kwamadoda, ufumana okona kulungileyo kwihlabathi liphela kwaye unokuzama iindlela ezahlukeneyo.
Ukuba ucwangcisa ukubuza umchebi wakho ngenwele eziphakathi, qiniseka ukuba uyazi ukuba yeyiphi inkangeleko oyakuyibeka kwisitayile ixesha elininzi kuba ukhetho lwakho luvela kwikama elide kwaye ubrashe ubuyele kwindoda kunye neqhina eliphezulu- nganye yazo efuna ukusikwa okwahluke kancinci.
Nangona kunjalo, ukuba ucwangcisa ukukhulisa iinwele zakho, siyacebisa ukuba unciphise kuphela iingcebiso zokususa iziphelo, kwaye ushiye iinwele zakho ubude begxalaba kwaye uqukuqela ubuninzi bevolumu kunye nokuhamba.
Inkqubo ye- indaoda elungile ulungiso lweenwele oluhle kunye nefashoni eyenzelwe ngokukodwa abafana abaneenwele ezinde. Ngokutsala iinwele zakho ziye kwi-bun kwaye uziqinisekise ngetayi, iinwele zakho azikho semsebenzini yemihla ngemihla kodwa i-bun iseyimbonakalo yefashoni.
Kodwa musa ukuzijongela phantsi iinwele ze-man bun - zinikezela ngeendlela ezininzi. Ukutshintsha izinto phezulu, i-bun man ingalukwa, iguqulwe ibe ngumsila womsila, okanye yahlulwe inwele ezithile zibotshelelwe kwaye ezinye zihamba ngokwendalo.
Ukuba ubusisiwe ngesakhono sokukhula kweenwele ezinde, indoda bun yenye yezona zinwele zishushu zamadoda kufanelekile ukuzama nje ukubona ukuba ungazikhupha na.
Apho Unokufumana khona iinwele
Ukufumanisa apho unokucheba khona iinwele kunokuchaphazela umgangatho wokucheba kwakho kanye ngendlela onxibelelana ngayo nomchebi wakho. Emva kwayo yonke loo nto, zonke iinwele kunye nesigama segama lokucheba emhlabeni asizukufumana iinwele ezilungileyo ukuba indawo yokucheba iinwele oyityelelayo ayinalo igama elomeleleyo.
Ngeendawo ezilungileyo zokufumana iinwele zamadoda, sicebisa ukuba ubuze usapho okanye abahlobo, kwaye ufunde uphononongo lwe-Intanethi. Kodwa sukujolisa nje kuvavanyo lwebhebhoni ngokubanzi - qiniseka ukubuza abachebi abakumgangatho ophezulu kuloo ndawo.
Ixabiso eliPhakathi lokucheba iinwele kwamadoda
Xa uthenga indawo yokucheba iinwele kufutshane nawe, kusengqiqweni ukuthelekisa uphononongo kunye namaxabiso. Kodwa ukuba ukhe wazibuza ngexabiso eliphakathi lokucheba iinwele e-United States, imalunga ne- $ 28, kubandakanya ne-tip. Ngokucacileyo iindleko zokucheba iinwele zixhomekeka kwindawo ohlala kuyo kunye nezakhono zokucheba iinwele, kodwa eli nani likunika umbono jikelele.
Nantsi itshathi ethelekisa amaxabiso okucheba kwamadoda ngamzi. Uyakuqaphela izixeko ezikhulu ezikhulu ezifana neLos Angeles, iSan Francisco, iNew York, iSeattle neChicago zigcina ixabiso eliphakathi eliphakathi kunomyinge wesizwe. Ukuba uhlala kwezi ndawo kwaye ufumana iinwele ezilungileyo kwindawo yokucheba iinwele yakho yangoku, emva koko uzive unentembelo yokuba ufumana ixabiso lempunzi yakho.
Iphele okanye ibethe? Abasebenzi abasikiweyo okanye isityalo saseFrance? Ukwahlula okanye ucolile? Quiff okanye ipompadour? Ukuba ubudidekile ngala magama kwixa elidlulileyo, awuwedwa. Isigama sokufunda iinwele kunokubonakala ngathi uthetha ulwimi lwasemzini ngamagama athetha izinto ezifanayo.
Ukuqonda iinwele zokucheba kunye namagama eentlobo ezahlukeneyo zokucheba zombini zifuna ulwazi ngakumbi kunamadoda amaninzi. Ngesi sizathu, amadoda amaninzi awakonwabeli ukuya kwindawo yokucheba iinwele kwaye akapheleli kwinwele awayeyifuna. Banokuyifanekisela into abafuna ukuyicheba, kodwa abazi ukuba bayicele njani.
Ngethamsanqa, ukuba usebenzisa isikhokelo sethu apha ngasentla, uya kuba yingcali ngokukhawuleza kweenwele kunye nokuseta isitayile. Ukuya kumchebi kufuneka kube yingxoxo elula kunokuba ibe yingxaki yokudideka, kwaye esi sikhokelo sijolise ekwenzeni inkqubo ibe mpuluswa kwaye ibe mnandi.
Ukubuza iinwele zakho zokucheba iinwele ozifunayo kungabonakala kunzima, kodwa khumbula ukuba baya kusebenza nawe ukufezekisa isitayile osifunayo. Ukuba awuqinisekanga malunga nendlela yokuchaza ukusika kwakho okuthandayo kunye nezitayile, ukuzisa umfanekiso kunokukunceda ufumane eyona nwele ilungileyo!
iitattoos zengalo zabafana
tattoo yentsapho yamadoda
iinwele ezilungileyo zamakhwenkwe
iinwele ezimfutshane undercut mens